Teknolojia mipoitra | Martech Zone
Teknolojia momba ny varotra sy ny varotra vao haingana niresaka momba izany Martech Zone, ao anatin'izany ny faharanitan-tsaina, bot, fanodinana ny fiteny voajanahary, fianarana milina, zava-misy virtoaly, sns.
Nahoana ny ekipa marketing sy IT no tokony hizara andraikitry ny cybersecurity
Zoma Janoary 21, 2022 Zoma Janoary 21, 2022 Alexander García-Tobar
Ny areti-mifindra dia nanamafy ny filan'ny departemanta tsirairay ao anatin'ny fikambanana iray mba handinika bebe kokoa ny cybersecurity. Misy dikany izany, sa tsy izany? Arakaraky ny ampiasantsika ny teknolojia amin'ny fizotrantsika sy ny asantsika isan'andro, no mety ho mora tohina amin'ny fandikan-dalàna. Saingy ny fampiharana ny fomba fanao amin'ny cybersecurity tsara kokoa dia tokony hanomboka amin'ny ekipan'ny varotra mahay. Ny cybersecurity dia mampanahy ny mpitarika ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao (IT), ny Chief Information Security Officers (CISO) ary ny Chief Technology Officers (CTO).
SlayerAI: Famaritana ireo teny maro samihafa ilainao handresena
Talata, Janoary 18, 2022 Talata, Janoary 18, 2022 Douglas Karr
Amin'ny ankapobeny, avo dimy heny ny isan'ny olona mamaky ny lohateny raha oharina amin'ny namaky ny kopia vatana. Rehefa nanoratra ny lohateninao ianao dia nandany valopolo cents tamin'ny dolara. David Ogilvy, Ogilvy on Advertising Slayer dia vokatra artificial intelligence (AI) izay maminavina ny fomba mahasarika ny lohateny amin'ny mpihaino iray. Ohatra, takatr'izy ireo fa ny Duke daisy denim dia manintona 15% kokoa noho ny short denim amin'ny tsenan'ny lamaody. Manao lahatsoratra ny Slayer
Clearbit: Mampiasa faharanitan-tsaina amin'ny fotoana tena izy mba hanamboarana sy hanatsara ny tranokalanao B2B
Alakamisy, Desambra 2, 2021 Alakamisy, Desambra 2, 2021 Nick Wentz
Ireo mpivarotra nomerika dia mifantoka betsaka amin'ny heriny amin'ny fampidinana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalany. Mampiasa vola amin'ny dokam-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy sy media hafa izy ireo, mamorona votoaty mahasoa hitarihana fitarihana miditra, ary manatsara ny tranokalany mba hahatonga azy ho ambony kokoa amin'ny fikarohana Google. Na izany aza, maro no tsy mahatsapa fa, na dia eo aza ny ezaka rehetra ataony, dia tsy mampiasa loatra ny tranokalany izy ireo. Mazava ho azy, ny fampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny tranokala dia ampahany manan-danja amin'ny paikady ara-barotra amin'ny ankapobeny, saingy tsy dia midika firy izany
Retina AI: Mampiasa AI vinavina hanamafisana ny fanentanana ara-barotra sy hametrahana ny sandan'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainany (CLV)
Alatsinainy, Novambra 29, 2021 Alatsinainy, Novambra 29, 2021 Emad Hasan
Miova haingana ny tontolo iainana ho an'ny mpivarotra. Miaraka amin'ny fanavaozana iOS vaovao mifantoka amin'ny fiainana manokana avy amin'ny Apple sy Chrome manafoana ny cookies avy amin'ny antoko fahatelo amin'ny 2023 - ankoatry ny fiovana hafa - ny mpivarotra dia tsy maintsy mampifanaraka ny lalaony hifanaraka amin'ny fitsipika vaovao. Ny iray amin'ireo fiovana lehibe dia ny fitomboan'ny sanda hita ao amin'ny angona an'ny antoko voalohany. Ny marika dia tsy maintsy miantehitra amin'ny angon-drakitra fidirana sy antoko voalohany mba hanampiana amin'ny fanentanana fanentanana. Inona no atao hoe Customer Lifetime Value (CLV)? Sanda mandritra ny androm-piainan'ny mpanjifa (CLV)
Ny fisian'ny sehatra ara-barotra mora vidy dia mbola mampiaiky volana, ary ny rafitra fitantanana votoaty (CMS) dia tsy misy hafa. Niasa tao amin'ny sehatra CMS manan-tompo, open-source, ary karama aho nandritra ny taona maro… ny sasany tsy mampino ary ny sasany sarotra. Mandra-pahafantarako ny tanjon'ny mpanjifa, ny loharanon-karena ary ny fizotrany, dia tsy manome soso-kevitra momba ny sehatra hampiasaina aho. Raha orinasa kely ianao ka tsy mahavidy vola an'aliny